Blog - Enepal Serofero
काठमाडौं । शिशु आफ्नो आमाको गर्भमा हुँदा आमाको खानपानबाट नै आहार प्राप्त गर्छ । तर जन्मपछि बच्चाको खानपानका सम्बन्धमा धेरै सावधानी अपनाउनुपर्छ । खानपानमा सामान्य त्रुटि हुँदा पनि बच्चालाई हानि पुग्छ । बच्चालाई तीन वर्षसम्मको उमेरमा जे खुवाइन्छ, त्यसले नै उसको पूरा जीवन र उसको आनीबानीमा असर पर्छ । यहाँ हामी सानो बच्चालाई के खुवाउनुहुन्छ अनि के खुवाउनुहुँदैन भनी चर्चा गर्दैछौं । पहिलो ६ महिना बच्चलाई आमाको दूध नै खुवाउनुपर्छ। ६ महिनापछि उमालेपछि चिसो भएको पानी चम्चाले पियाउनुपर्छ । त्यसपछि सानो गिलासले पियाउने हो। बच्चालाई बोतलबाट सकेसम्म दूध वा पानी नपियाउनुस्। ६ महिनापछि बिस्तारै बच्चाको आहारमा सामान्य कुराहरू समावेश गर्दै जानुस् । घरैमा बनेका दाल, खीर अलिअलि गरेर खुवाउँदै जानुस् । ६ महिनादेखि बच्चालाई केरा दूधसँग मुछेर खुवाउनुस् । बिस्तारै स्याउ, मेवा, आँप जस्ता फ
जिरी नेपालको जनकपुर अञ्चल, दोलखा जिल्लामा अवस्थित पर्यटकीय केन्द्र हो। राजधानी काठमाडौंबाट १ सय ८८ किलोमिटर दुरीमा रहेको छ। जिरी अरनिको राजमार्गको खाडीचौरबाट १ सय १० किलोमिटर टाढा पर्छ । तामाकोशीको गडगहाडट, चारैतिर हरीयाली, डाँडाबाट झररिहेका सुन्दर झरना तथा ग्रामीण परिवेशले मनमा नयाँ उमङ्ग जगाउँछ। पर्यटकहरू सगरमाथा जान यतैबाट जानपर्ने भएकोले नेपालको स्विजरल्याण्डको उपाधि पाएको जिरी, सगरमाथाको प्रवेशद्वार पनि भनिन्छ । यहाँका रैथाने वासिन्दालाई जिरेल भनिन्छ । मनमोहक प्रकृति तथा असल स्वभावका स्थानीय जिरेल एवं शेर्पा जातिका मानिसहरूले पर्यटकलाई आकषिर्त तुल्याएका छन्। स्विट्जरल्यान्डका विकासविद् स्वर्गीय टोनी हेगनको नजरमा ‘जुरिक’ सहरको जस्तै भौगोलिक बनावट र हावापानी भएको जिरी वास्तवमा जुरिक नै हो । ‘यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउने पर्यटकहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ तर भौतिक
तपाईलाई लाग्ला, मैले सेक्सको बारेमा सबै कुरा जानेको छु, बुझेको छु । यसबारे सामान्य सबै जानकारी मसँग छ । तर त्यस्तो होइन, सेक्स सम्बन्धी केही यस्ता रोचक तथ्यहरु छन्, जुन कुरा थाहा पाएर तपाईं छक्क पर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रोमा सेक्स काम भन्दा बढी कुराको बिषय बन्ने गरेको छ । तर हामीले यसको बारेमा रोचक तथ्यहरु थाहा नपाइरहेका हुनसक्छौं । आउनुहोस्, सेक्ससँग जोडिएका १७ रोचक यथार्थहरु थाहा पाऔं : कयौं महिलाहरु बच्चा जन्माउने समयमा यौन उत्तेजनाको महसुस गर्दछन् । आफ्नो जीवनमा कम मात्रै महिलाहरु यौन उत्तेजनाको उत्कर्षमा पुगेका हुन्छन् । यो किनपनि हुन्छ भने पुरुषलाई आफ्नो यौनसाथीको भन्दा बढी आफ्नै सन्तुष्टिको बढी मतलब हुन्छ । यौन सम्पर्कको क्रममा जब पुरुषको विर्य स्खलन हुन्छ, त्यतिबेला यसको गति २८ माइल प्रतिघन्टा हुन्छ । अहिलेसम्म १०० मिटरको विश्व रेकर्ड २२.९ माइल प्रतिघन्टाको मात्र छ । ५ प्रत
हामीलाई लाग्छ मृत्यु अवश्यंभावी कुरा हो र मानिसको मृत्यु जुन कुनै समयमा पनि हुनसक्छ । मृत्युले दिन र रात कुर्दैन । यो शाश्वत सत्य हो । तर, मृत्युको समयका विषयमा भएका शोधले केही डरलाग्दा तथा अनौठा तथ्य बाहिर ल्याएका छन् । वैज्ञानिकहरुका लागि विश्वमा मृत्युका घटना दिनभन्दा रातको समयमा, अझ बिहान ३ बजेदेखि ४ बजेको बीचमा धेरै हुने गरेका छन्। शोधकर्ताहरुका अनुसार त्यस समयमा मानिसको शरीर सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा हुन्छ । आम रुपमा विश्वमा कैयौं सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यताहरु पनि छन्, जस अनुसार रातको तेस्रो प्रहरलाई मृत्युको हिसाबले सबैभन्दा खतरनाक मानिन्छ । तेस्रो प्रहर, अर्थात् रातको तीन बजेदेखि बिहान ६ बजेको समयसम्म । यो तथ्यलाई केही हदसम्म चिकित्सा विज्ञानले पनि पुष्टि गरेको छ । दमरोगीमा मृत्युको खतरा दिउँसोको तुलनामा बिहान ३ बजेदेखि ४ बजेसम्मको अवधिमा ३ सय गुणा धेरै हुन्छ । उक्त स
यदि तपाईले जति जे गरे पनि पैसा जोगाउन सकिरहेको छैन भने यसो गर्नुहोस। घरको मुख्य ढोकामा शनिबारको दिन सर्स्युको तेलको दीपक बाल्नुहोस्। दीपक निभीसकेपछि यदि तेल बाकी रह्यो भने उक्त तेललाई सान्ध्यको समयमा पिपलको वृक्षमा चढाईदिनुहोस। ७ शनिबारसम्म लगातार यसो गर्नाले धनको कमि हुदैन। यसो गर्नाले तपाइको हातमा पैसा सधै टिकीरहन्छ। यो पनि पढ्नुस : एजेन्सी । हामीले अधिकांश समयमा कुकुरहरु ले रुखको फेँदमा या त गाडीको टायरमा पिसाब फेरेको देख्छौँ । हाम्रो लागि यो निकै सामान्य कुरा हो ।तर के तपाईले यसको कारण बारे जान्ने कोशिस गर्नु भएको छ ? छैन भने आज हामीले तपाईलाई यसको विशेष कारण बारे बताउन गइरहेका छौँ । कुकुरलाई पिसाब फेर्ने जति नै धेरै ठाउँ दिए पनि उनीहरु रुख, गाडी, पर्खाल या त कुनै यस्तै ठाडो वस्तुमा पिसाब फेर्ने गरेको देखिन्छ । यसको पछाडी एउटा तार्किक कारण छ । वास्तवमा कुकुरहरु आ-आफ्न
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) नकारात्मक विचार र उग्र स्वभावको कारण भोलि तपाईको हरेक कार्यमा बाधा पुग्ने देखिन्छ। भोलि तपाईले आफ्नो बोलि,क्रोध साथै व्यवहारमा नियन्त्रण नराख्नु भएमा दुख पाउनु हुने देखिन्छ। भोलि तपाईको कुनै पनि प्रकारको खतरनाक कदमका कारण तपाईले मात्र नभई परिवार साथै सहकर्मीहरुले दुख पाउने हुँदा सजक रहनु होला। भोलि तपाईमा शारीरिक साथै मानसिक रुपमा उत्साहको कमी हुने देखिन्छ। बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) भोलि अग्रजहरूको सहयोग जुट्नाले सजिलै कार्य सपदन हुनेछ। भोलि तपाईको दिन तपाईको धेरै शुभ रहने देखिन्छ भने भोलि तपाईको नजिकका व्यक्तिहरु सँग सुखद यात्रा समेत रहन सक्ला। भोलि तपाईको नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्ने दिन परेको छ। पहिला बिग्रिएका सम्बन्ध पनि भोलि तपाईको सुध्रने देखिन्छ। भोलि आकस्मिक धन मिल्नाले मानसिक चिन्ता समेत हटेर जान सक्ला।
धेरै महिला वा पुरुषको प्रश्न व्रत बसेको बेला शारिरीक सम्बन्ध राख्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने रहेको छ, धर्मशास्त्र र चिकित्साशास्त्रमा यसको जवाफ फरक पाइएको छ । हिन्दू धर्मशास्त्रका अनुसार व्रतको दिन मन भगवानमा मात्र लगाउन पर्ने कारणले यसबेला भोजन र यौन दुबै अनुचित मानिएको छ । चिकित्साशास्त्रले भने धर्मशास्त्रले जस्तो कुनै कडाई गरेको छैन् नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश हो । यहाँका नागरिकहरुले आफूले चाहे अनुसारको धर्म मान्न पाउनेछन् र आफूले मान्न चाहेको धर्म स्वतन्त्रतापूर्वक मानेका पनि छन् । व्रतको शारीरीक सम्बन्धको विषयमा कुन धर्म शास्त्रले के भनेका छन् त ? हिन्दुधर्मको अनुसार दिनभर भगवानमा मन लगाइने कारणले सहवासको कुरा सोच्नु हुँदैन भन्दै यदि यस्तो कुरा सोचेमा दिमाग भ्रष्ट हुन्छ भनिएको छ । इस्लाम धर्मग्रन्थमा पनि व्रत बसेको बेला सहवासलाई बर्जित गरिएको छ । क्रिश्चियनहरुमा भने जे गर्न पनि स्
काठमाडौँ,पौष ०७ । महिनावारी आज होला, भोलि होला भन्दाभन्दै २६ वर्ष भइसकेकी थिइन् पोखराकी एक युवती । महिनावारी हुने उमेरको दोब्बर अर्थात् २६ वर्षसम्म पनि महिनावारी नभएपछि चिकित्सककहाँ सल्लाह लिन पुग्नु स्वाभाविक थियो । महिनावारी नभएर विवाह गर्न समेत अप्ठ्यारो भएपछि उनी चिकित्सकहाँ पुगिन् । पोखराकी ती युवती वसुन्धरास्थित इशान बाल तथा महिला अस्पतालमा पुगेपछि चिकित्सकहरूले उनको योनी र पाठेघर नै नभएको पत्ता लगाएका थिए । त्यसपछि उनलाई चिकित्सकहरुले शल्यक्रिया गरी योनीमार्ग बनाइदिएका छन् तर पाठेघर नभएका कारण भविष्यमा उनको सन्तान भने हुनेछैन । इशान बाल तथा महिला अस्पतालका महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. आशा सिंहको नेतृत्वमा बालरोग विशेषज्ञ डा.आरपी चौधरीि, डा. सुमनबिक्रम अधिकारी र एनेस्थेसिया चिकित्सक डा. छन्दबहादुर बुढाथोकीको टोलीले सातघण्टा लामो शल्यक्रियापछि ती युवतीको योनीद्वार बनाएको ह
मगर्नी भाउजूको कथा (14,107)
वाइन पिउँदै भाउजु संग बितायाको त्यो रात (11,598)
राजधानीमा अचम्मको बलात्कार – सुन्दा तपाइको होस् उड्छ! (10,097)
जात अनुसार नाक आँखा र फेस फरक भएझै के जात अनुसार महिलाको योनी पनि भिन्न भिन्न हुन्छ ? (8,615)
धादिङको मलेखुबाट नाइट बसमा किचकन्या चढेपछी हंगामा (हेर्नुहोस भिडियो) (8,474)